Vaovao - Inona no fantatrao momba ny fonosana boaty fanomezana be dia be?
Inona no fantatrao momba ny fonosana boaty fanomezana be dia be?
Momba ny famaritana ny boaty fanomezana avo lenta, na dia ny fikarohana Google aza, dia tsy manana famaritana mazava tsara, ary samy hafa ny famaritana ny olona tsirairay, ity lahatsoratra ity dia niresaka momba ny boaty fanomezana avo lenta, indrindra ho an'ny boaty apetaka, izay mila dingana maro. , ary mila boaty fametahana elaboraly amin'ny tanana, atiny ho an'ny namana:
Ny boaty fanomezana dia asan'ny fanitarana ny filàna ara-tsosialy fonosana, tsy vitan'ny hoe manana ny fonosana ary manasongadina ny ampahany amin'ny anjara asa amin'ny lafiny iray, ny ambaratonga faran'izay tsara amin'ny boaty fanomezana dia mizara tsara ny fampitomboana ny sandan'ny entana, amin'ny lafiny iray, manalemy ny sandan'ny fampiasana ny entana. Mba hanasongadinana ny vidin'ny vokatra, dia sarona lafo vidy sy tsara tarehy kokoa no hiarovana ny vokatra. Tsy misy fonosana ankapobeny amin'ny rohy mivezivezy mety loatra, ny sandan'ny fanomezana dia somary avo, ny vidiny eo amin'ny fivezivezena dia avo dia avo, toy ny afaka amin'ny fifandonana, tsy misy fahasimbana sns. Tsy misy isalasalana fa misy akony lehibe tokoa amin'ny fanatsarana tarehy ny entona hisarihana ny mpanjifa.
1. Fanasokajiana boaty fanomezana avo lenta
Ny fizarana lamba dia ny tena zava-dehibe dia ny: taratasy, hoditra, lamba sns.
Sokajy taratasy: ao anatin'izany ny taratasy baoritra volamena sy volafotsy, taratasy vita amin'ny perla ary karazana taratasy kanto rehetra;
Hoditra: anisan'izany ny lamba PU vita amin'ny hoditra sy hoditra, sns.
Lamba: ao anatin'izany ny karazana lamba landihazo sy rongony rehetra.
Avy amin'ny sehatry ny fampiharana, ny sokajy lehibe dia ny simika isan'andro, divay, sakafo, paraky, elektronika niomerika, firavaka sns.
Sokajy simika isan'andro: fampiasa amin'ny cosmetika matetika, manitra ireo saha roa ireo;
Toaka: divay fotsy, divay mena ary karazan-divay vahiny rehetra;
Sokajy sakafo: sôkôla sy sakafo ara-pahasalamana indrindra;
Sokajy paraky: sigara avo lenta avoakan'ny orinasan-tsigara lehibe;
Elektronika nomerika: toy ny boaty finday marika avo lenta, boaty solosaina takelaka, sns.
Firavaka: Ny firavaka isan-karazany amin'ny ankapobeny dia fomba tsy manam-paharoa amin'ny fonosana boaty fanomezana mba handotoana ny toetran'izy ireo.
2. Dingana famokarana boaty fanomezana avo lenta
Ny fizotry ny famokarana boaty fanomezana dia be pitsiny kokoa noho ny boaty taratasy mivalona. Ny fanodinana boaty taratasy aforitra dia mazàna amin'ny alàlan'ny fanontana ➝ famaranana (famonoana, volafotsy, horonan-tsary, UV eo an-toerana, convex, sns.), Fanaraha-maso sy fametahana boaty fametahana sy fametahana.
Ny fizotry ny famokarana ny boaty fanomezana dia vita amin'ny fanontana ➝ fitaovana famaranana ny tany ho faty fanapahana volondavenona board➝ maty manapaka volondavenona birao greoving biriky volondavenona mamorona sy ny fametahana ara-nofo alohan'ny fivoriana, ny fanaraha-maso sy ny fonosana.
Avy amin'ny fizotran'ny vokatra roa, ny fizotry ny famokarana ny boaty fanomezana dia sarotra sy sarotra, ary ny fenitra teknolojia dia avo lavitra noho ny an'ny boaty taratasy mivalona. Ny ankamaroan'ny boaty fanomezana avo lenta mahazatra amin'ny fiainantsika andavanandro dia vita amin'ny taratasy, ary ny etona taratasy koa no mety indrindra amin'ny fampiharana fitsaboana ara-teknolojia bebe kokoa.
3. lesoka mahazatra sy teboka fanaraha-maso kalitao
Loose edge: aorian'ny fametahana ny taratasy amin'ny sisin'ny efatra amin'ny vata boaty dia tsy tery ny miraikitra, ary misy fisehoan-javatra mihantona eo anelanelan'ny taratasy sy ny tabilao volondavenona.
Miketriketrika: Rehefa avy nopetahany takelaka ambonin'ilay taratasy ny endrika tsy ara-dalàna, samy hafa ny halavan'ny vala maty.
Zoro tapaka: simba ny taratasy ary miharihary eo amin'ny zorony efatra amin'ny boaty aorian'ny fametahana azy.
Fipoahana vovoka (fiparitahan'ny farany ambany): noho ny maha-marina ny famokarana takelaka antsy dia tsy marina tsara, na ny offset amin'ny fametahana pasteur, ka vokatr'izany ny fametahana taratasy aforitra taorian'ny fikatsoan'ny stack, nahatonga ny takelaka lavenona naseho.
Bubble: bubble tsy miova tsy miovaova, tsy mitovy refy amin'ny ambonin'ny boaty.
Lakaoly lakaoly: Soritry ny lakaoly tavela amin'ny habakabaka.
Protrusion: misy residuam-boninkazo ao amin'ny sosona ambany amin'ny fonosana, ny ambonin'ny fanampiana eo an-toerana, manimba ny fisaka eo ambonin'ny vata.
Zoro avo sy ambany: birao volondavenona amin'ny antsasaky ny famonoana maty na ny fivoahana, ny lafiny efatra amin'ny vala mamorona lafiny mifanila roa amin'ny haavony dia tsy mifanaraka.
Mihombo ny rano: aorian'ny fametahana ny vatan'ny boaty, mba hahatonga ny sisiny sy ny zorony ho matevina kokoa, dia ilaina ihany koa ny mampiasa ny scraper mba hikikisana ny sisin'ny efatra amin'ny vatan'ny boaty, satria tsy mahazatra ny hery, hiseho ny sisiny iray manontolo ny halavany, ny concave ary ny convex strip na ny bubble kely, toy ny rano miangona.
4. Ny firafitry ny baoritra avo lenta
Boaty fanomezana isan-karazany, avy amin'ny firafitra manondro miakatra sy midina miaraka amin'ny sarony fonony sy ny endriny manarona fototra, mifangaro ao anaty boaty cartridge, misy ny fanokafana sy ny fanidiana ny karazana varavarana, ny karazana fitambaran-boky mifangaro, ireto karazana nametraka ny firafitra fototry ny boaty fanomezana, eo ambanin'ny rafitra fototra, ny mpamorona dia namorona karazana boaty protean, hatramin'ny famonosana ireo vokatra napetraka tamin'ny anarana mangatsiatsiaka, Ity manaraka ity no voalohany amin'ny karazana boaty sy anarana mahazatra hanaovana expression :
1) boaty sy fonony fonony
Ny sarony sy ny fonony dia manondro karazana boaty. Ny fonon'ny baoritra dia "sarony" ary ny ambany dia "fototra", noho izany dia antsoina hoe fonony sarony sy fotony izy. Ny rakotra takelaka sy ny fonony, fantatra ihany koa amin'ny hoe boaty sy boaty ifotony, dia be mpampiasa amin'ny karazana fanomezana sarotra boaty, boaty kiraro, boaty atin'akanjo, boaty lobaka, boaty finday sy karazana boaty fonosana hafa
2) boaty boky
Ny akorandriaka dia misy akorandriaka sy boaty anatiny, ny kavin'orona ao anaty boaty anatiny mandritra ny herinandro, ny fanambanin'ny boaty anatiny sy ny rindrina aoriana, ny sisiny roa amin'ny akorany dia mifamatotra, ary ny tapany ambony amin'ny unglued azo vohaina, ary ny endrika ivelany dia toy ny boky hardcover.
3) boaty amin'ny vatasarihana
Raha ny boaty sy ny fonony manarona dia afaka manome karazan'olona mahatsapa fahatsapana ho an'ny olona iray, avy eo ny boatin-kisarisary dia afaka manao karazana mistery an'ilay olona. Milaza izany ho mistery, satria ny fijerena ny endriny dia mahatonga ny olona hanana karazana tsindrimandry ka tsy andriny ny hisintona fijery ao anaty ilay “harena”.
Ity tratran'ny vatasarihana ity dia teraka ho boaty harena. Saron'ny boaty karazana vatasarihana dia miendrika fantsona, ary ny vatan'ny boaty dia miendrika kapila, ny vatan'ny boaty fonosana dia rafitra roa mahaleo tena. Ny maodely izay mamolavola izany, avelao hisokatra ho lasa karazana mahafinaritra. Ny fisintomana tsimoramora ny fotoana dia lasa fahafinaretana eo noho eo.
4) boaty Hexagonal
Hexagonal ny endrika boaty, ary ny ankamaroan'izy ireo dia rakotry ny sarony sy ny fotony.
5) boaty fikandrana
Sokafy ny varavarankely tadiavina amin'ny lafiny iray na maromaro amin'ilay boaty, ary apetaho ny PET mangarahara sy ireo fitaovana hafa ao anatiny mba hampisehoana feno ny mombamomba ny atiny.
6) boaty aforitra
Birao volondavenona toy ny taolam-paty, miaraka amina taratasy plastika na taratasy apetaka hafa, manoritra birao volondavenona hamela toerana elanelam-potoana iray, ny fampiasana ny iray manontolo ho endrika telo-habe, azo aforitra malalaka.
7) boaty fiaramanidina
Boaty fiaramanidina, noho ny fisehony dia mitovy amin'ny fiaramanidina antsoina hoe, an'ny rantsan'ny baoritra, dia fonosana mazava, nalefan'ny fandefasana, vita amin'ny taratasy mihombo.
Ireo no rafitra boaty fanomezana mahazatra indrindra eny an-tsena, ary misy boaty miendrika manokana manokana maro tsy lazaina intsony.
Amin'ny maha-fonosana vokatra boaty fanomezana mahazatra eny an-tsena, ny boaty fanomezana avo lenta dia tian'ny tompona marika hatrany. Ny firafitra, ny fitaovana ary ny haitao misy ny boaty fanomezana dia mihabe harena. Ny fomba fanaovana asa tsara amin'ny famonosana boaty fanomezana sy ny fanontana dia olana izay hiatrika ny orinasam-panontana.